Qindaa'inoota kuusdeetaaf ODBC adda baasa. Inni kunis deetaa gahiinsaa,qindaa'inoota oofaa, fi hiikaa bocquu of keessatti qaba.
Maqaa fayyadamaa katabi kuusdeetaa barbaaduuf.
Kuusdeetaa fayyadamtoonni seeran ala akka itti hin fayyadamneef dhorkuu. Ittiga tursa hundaaf galchuu qofatu sirraa eegama.
Barruu kanatti fayyadamii ooftuu qindaa'inootaa kan biraa galchuuf yeroo barbaachiisetti.
Kuusdeetaa mul'isuuf fayyadamte lakkaddaa jijjiirraa LibreOffice keessatti filadhu. Inni kun kuusdeetaa hin miidhu. Arfii durtii sirna dalagaa fayyadamuuf "Sirna" filadhu. Barruu fi kuusdeetaawwan dBASE dheerina arfii dhaabbataatti murtaa'a, arfiileen hundi lakkoofsa baayitii walfakkaatuun lakkaddaa'u.
Gatiilee maddan kebaaffachuu
Dirreewwan deetaa madda deetaa ODBC ykn JDBC akka ofmaan dabalamanniif LibreOffice kakaasa. Yoo kuusdeetaan amala ofmaan dabalamuu baqqana SDBCX keessatti gargaaruu baate saanduqa filannoo kana filadhu. Walumaagalatti, ofmaan dabalamuun dirree furtuu dursaa qofaaf filama.the auto-increment is selected for the primary key field.
Ajaja SQL maddi deetaa ofmaan dirree deetaa Itergaa adda baheef akka dabalamuuf ajaju galchi. Fakkeenyaaf, himni SQL dirree deetaa uumuuf gargaaru:
CREATE TABLE "gabate1" ("id" INTEGER)
Kuusdeetaa MySQL keessatti dirree deetaa "id" ofmaan dabaluuf, hima gara itti jijjiiri:
Jecha biraan, saanduqaa AUTO_INCREMENT jedhu Hima ofnaa-dabalametti galchi.
Gaafata gatiilee maddan
Furtuu dursaaf dirree deetaa gatii dhumaa ofmaan dabalame deebisu hima SQL galchi. Fakkeenyaaf:
Moggaasa ittisamoota SQL92 fayyadami
Maqaalee arfiilee madda kuusdeetaa keessatti ittisamoota moggaasuu SQL92 tiin walii galan fOnly fayyadaman qofaaf heyyama. Arfiilee kan biroo hundi ni tuffatamu. Maqaan hundi qubxiqqaa, qubguddaa, ykn jalmura( _ ) dhaan eegaluu qaba. Arfiileen hafan qubeewwan ASCII, jalmuraa, fi lakkoofsota ta'uu danda'u.
Kuusdeetaa faayila irratti hundaa'aniif galaalee fayyadami
Madda deetaa ammaa galaale fayyadama. Inni kunis kan fayyadu yoo maddi deetaa ODBC sarvarii kuusdeetaa ta'ee dha. Yoo maddi deetaa ODBC ooftuu dBASE ta'e , saanduqa filannoo kana qulqulleesi.